İZBAN Shaqaalaha waxay yiraahdaan si dhaqso leh ayey u weerari doonaan | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirIZBAN Shaqaalaha Waxay sheeganayaan inay sii wadi doonaan degganaan
17 / 12 / 2018 35 Izmir, Tareenka Tareenka, tareenka, Turkish Aegean, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, TURKEY
Shaqaalaha isban ayaa sheegay in ay joojin doonaan shaqo joojinta iyagoo go'aaminaaya
Dhacdooyinka 8. İZBAN shaqaaluhu waxay galeen maalintii gorgortanka wadajirka ah si waafaqsan rabitaankooda illaa dhamaadka shaqo joojinta ayaa sheegay inay ka go'an tahay inay sii wadaan.
Izmir degmada Metropolitan ee Jamhuuriyadda Turkey Tareennada State (TCDD) oo shuraako la ah shabakada shaqeeya gaadiidka dadweynaha ee joojinta (İZBAN) Izmir hareeraheeda Network bilaabay by shaqaalaha ku guuldareystay natiijada wadahadalada shuruudaha shaqada ayaa tegey toddobaadkii. Shaqaalaha İZBAN ee xubnaha ka ah Demiryol-İş Union waxay cadeeyeen inay ka go'an tahay inay sii wadaan shaqo joojinta ilaa baahidooda la fulinayo iyo inay taageerayaan İzmir wax ka badan inta ay filayaan.
Isagoo ku nuux nuuxsaday in hamigooda uu yahay sidii maalintii koowaad ee shaqo joojinta, Wakiilka goobta shaqada Berkan Arda wuxuu yiri, “Ururo badan oo ganacsi, xisbiyo siyaasadeed iyo ururo fara badan ayaa u yimid inay taageeraan. Sidoo kale, tiro badan oo muwaadiniin ah ayaa noo yimid, ayuu yidhi. Way yaqaanaan oo taageeraan xuquuqdeena. Waan dhaqaaqaynaa, waxaan joognaa bilowgii. Dhibaato malahan xasilloonida. Waxaan ka dambeynaa dalabkeena. Tirooyinka uu sharxay İZBAN waxaa kiciyay kaliya hal ama labo qof. Waxay ku saabsan tahay aragtida oo dhan. IZBAN waa been mana sharraxi karin wax intaas ka badan. Shaqo joojinta ayaa sii socon doonta illaa inta aan kaheleyno xuquuqdeena. Dadka reer Izmir ha la socdaan wararka saxda ah. Haddii wax maskaxdooda ku jiraan, ha yimaadaan oo ha nala hadlaan. Waxaan u taagan nahay xuquuqdeena, howlaheena, Ujeedada kale ma lihin. ”
'4 CONTRACT WAA CUDURKA BULSHADA'
Mehmet Şerif, oo ka shaqeyn jiray farsamoyaqaanka ayaa yidhi: iz Waxaan la jirnaa dhamaan asxaabteena. Dadweynuhu way ogyihiin in tirooyinka uu sharaxay İZBAN aysan dhab ahayn. Shaqo joojinta ka hor, waxaan dadweynaha ogeysiinay. Waxaan galay sanadkii sagaalaad, lacagta aan maanta helay, 1860 lira, xuquuqaha bulshada iyo dawladdu waxay siisaa 2 kun 400 lacag. Maamulka IZBAN waa inuu garab istaagaa shaqaalaheeda. Waxaan rabnaa inaan taageerno qoyskeena. Ma rabno wax kale. Waxaa naga go'an inaan sii wadno shaqo joojinta. Kani waa qandaraaskeena afaraad oo ilaa iyo hadda waxaan marwalba ku dhammeysanay sidii 'ZBBAN uu doonayay, ma aanan helin waxaan dooneynay. Hadday horay u bixiyeen xuquuqdeena, tirooyinkaan maanta laga hadli maayo. Qandaraaska 4 wuxuu aruurinayaa dalabkeena. Waxaan raali gelin ka siinaynaa dadka Izmir, maanaan dooneynin inaan sameyno shaqo joojintan, laakiin waxaan dooneynaa inaan taageerno qoyskeena. Waxaan rabnaa inaan ku noolaano nolol hagaagsan. Noo ogolow iyaga inay na fahmaan oo na garab istaagaan.
Qorshayaasha maamul ee IZBAN waa la ilaaliyay '
Kerem Özgür, farsamayaqaanka dayactirka gawaarida oo doonaya qabyo qoraalka heshiiska wadajirka in loo aqbalo si la mid ah, ayaa yiri: "Cimiladu way qabow tahay, roob ayaa diidaya laakiin midnimada shaqo joojinta ayaa naga wada dhigeysa. Taageero fara badan oo laga helo muwaadiniinta. Shaqaale fara badan ayaa yiri waxaan howlgab aheyn. 10 9 ee Izmir waxay u egtahay mid togan. Maamulka IZBAN ayaa mas'uul ka ah shaqo joojinta. Tirooyinka uu sharaxay İZBAN ma jiraan. Malaha, waxay ku muujiyaan kharashkooda sidii kharashaadka shaqaalaha toZBAN. Maamulka IZBAN wuxuu dadka u jiidayaa nacaybka iyo nacaybka noo qabo, laakiin qorshayaashaas lama ilaalin. Dadku aakhirka waxay kibis u keenaan gurigaaga halkan, aynu dilno sababta aan u joogsanay. Dhamaanteen waxaan qabnaa dhibaatooyin dhaqaale. Dhamaanteen waxaan leenahay deyn. Waxaan fulinay heshiiskan wadajirka ah shan ama lix bilood. Aan oggolaanno in dadka reer Izmir aysan wax dhibaato ah la imaan doonin laakiin kama dhammaaneyno wixii aan rabno.
TAAGEERADA METRO SHAQAALAHA SI AY UU SHAQEEYAAN SHAQAALAHA
Taageerayaasha ugu weyn ee shaqaalaha İZBAN waa İzmir Metro shaqaale kuwaas oo xubno ka ah Railway-İş, kuwaas oo aan kaligood ka tagin tan iyo maalintii ugu horraysay. Shaqaalaha Izmir Metro, oo iyagu ku guda jira dhexdhexaadinta heshiisyada wadajirka ah, ayaa sheegaya in ku guuleysiga İZBAN shaqaalaha ay saameyn xun ku yeelan doonto qandaraasyadooda. Celel Dagasan, Madaxa Wakiilka Izmir Metro Workplace, wuxuu cadeeyay inay ku noolyihiin khadka gaajada wuxuuna yidhi, zaman Majirto wax shaqo ah oo laga shaqeeyo marka shuruudahan aan la saxixin. Waxaan u halgamaa xuquuqda iyo rootida mustaqbalkeena iyo carruurteenna. Bayaanka loo shaqeeyaha iyo macluumaadka la siinayo saxaafadda ma ahan kuwo dhab ah. Kama codsanayno loo shaqeeyaha tirada dadka waaweyn ee lagu buun-buuniyay saxaafadda. xuquuqda shaqaalaha ee Turkey lagu faa'idaysto. Shaqaaluhu waxay sii wadaan halganka shaqaalaha. Ha la aqbalo dalabkeena sida ugu dhaqsaha badan ”.
Mashruuca 35 Izmir 35 waxaa lagu fuliyaa go'aan
Madaxwaynaha Nuhooglu wuxuu go'aansaday inuu ilaaliyo Haydarpaşa iyo agagaarkiisa
Wasiirka Arimaha Dibada Joorjiyaanka Kvirikashvili oo kahadlay mashruuca tareenka ee BTK…
Kocaoğlu oo ku booriyay shaqaalaha IZBAN in ay weeraraan
Wasiirka Binali Yildirim, Erzincan-Mus ayaa sheegay in aysan jirin shaqo tareen oo xawaare sare leh
Heshiiska gorgortanka ee IZBAN